Xuquuq iyo waajibaad | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / In waalid la ahaado / Xuquuq iyo waajibaad
Sida canugga ugu fiican ayaa wax kala saareysa xagga arrimaha ku aaddan daryeelka, deegaanka iyo wada jiridda. Rabitaanka canugga ayaa mar walba la tixgelinayaa, iyadoo la eegayana da'da iyo bislaashada. Haddii ay taasi ugu habboontahay waa in hadafku uu ahaadaa in waaliddiintu yihiin xannaano wadaag.
Xannaanaynta carruurta waxay tahay xuquuqda iyo waajibaadka saaran qofka xilhayeha xannaanadda oo badanaa ah waalidka. Taasi mecnaheed waxeey tahay in xananeeynta caruurta aad ku lee dahay xuquuq iyo waajibaad ku saaran. Carruurta waxay xaq ku leeyihiin xannaanyn inta ay ka gaarayaan da'da 18 sano.
Markii qof carruur ah (oo aan weli 18 sano buuxsan) la siiyo ruqsadda degenaanshada, waa in aabeha u xaqiijiya in uu aabehiisa yahay, waa haddii isaga iyo hooyada aysan is-qabin. Sharciga sidaaso faraya iyadoo fiirogaar aan la siinin haddii aabeha u dalka Iswiidan joogo iyo in kale. Guddiga arrimaha bulshada ayaa degmooyinka badidooda ka arrinsato arrimaha xiriirka la leh xaqiijinta aabenimada, laakiinse, xitaa Guddiga arrimaha bulshada ee degmooyinka ama ama guddiyada dowladaha hoose ayaa arrimahaas ka arrinsan karo. La xiriir degmada aad degan tahay sida aad ku hesho warbixinta nidaamka degmada u degsan.
Canugga, waaliddiin ama qof kale oo weyn la'aan yimaada Swiidhan, waxaa loo doorayaa qof waalidka booskiisa sharci ahaan u metesha. Qofka waalidka booskiisa sharci ahaan gala wuxuu mas'uul ka noqonayaa canugga xaaladihiisa shakhsiga ah, wuxuuna dhawrayaa canugga danihiisa wakiilka sharciga ah iyo waaliddiinta booskoodi.
Haddii aad ka welwelsantahay in canug uu dhibaato ku jiro waxaad la xiriiri kartaa Hey'adda adeegga bulshada. Haddii aad markhaati u ahayd xoog adeegsi ka dhan ah canug waxaad booliiska kala xiriiri kartaa taleefan nambarka 114 14.
Halkan waxaad si dhameystiran uga akhrisan kartaa sharciga xeerka qoyska.